Nhau - Blog -Tokyo vatengi vanoshanyira kwe6S mill audit & inogadziriswa base & metiresi mill tour
Mufananidzo naSirius Ding
Tokyo agency VaTanaka vakabatana naBeajom kwemwedzi mishoma ikozvino. Yedu kunze kwenyika inogadziridzwa mubhedha hwaro uye inoenderana yakakwenenzverwa metiresi kuNorth East Asia musika iri kugara ichiwedzera 23% yakakwira YOY. Asi vachidzivirirwa nematare eCOVID-19, VaTanaka vakadzokororazve kushanyira chigayo chedu che-on-saiti manejimendi odhitaiti uye kuongorora kwehunhu cheni kutarisa kusvika Sep ino apo FMC inoratidza muShanghai Putong.
Yakarongedzwa musangano wekurangarira furo yekucheka maitiro
Multiple layer gel memory foam foam neakasiyana ekuomesa module, inopa mamatiresi akagadziriswa mushandisi ruzivo uye akagadzira mhando yewarandi.
Seimwe ye Beajom main product portfolio, chinogadzikiswa pamubhedha weworkshop yemusangano yakakwezva kutarisisa kune vatengi veTokyo. Vakaungana pamwechete kuti vabvunze vane hanya-mapoinzi nezve auto-welding rwizi mutsara uye asiri-munhu akavhiringidzwa laser yekucheka mitsara.
Vakadaro VaTanaka, avo vakadonhedza paguyo remidziyo muChina. Kubva pakuona kwake, mazuva ano kushanya kwemagayo kwakaratidza kurongeka mukugadzira chero chinhu maererano nematiresi uye chigadziko chinogadziriswa. Kushanya uku kunomukurudzira iye pamwe nechikwata chake zvakanyanya kuvimba nekutengesa kwedu mumusika weNorth East Asia. Comprehensive mhando kutonga uye nyanzvi ODM dhizaini kugona kunozotungamira chigadzirwa pane mhepo yemhepo.
Beajom ichabuda mutsamiro wekugadzira mutsetse muJiangsu Nantong, kuti ive chaiyo yakasanganiswa sosi mhinduro kubva pamutsago / topper / metiresi kuba zvigadzirwa zvinogadziriswa zvemubhedha. Nenzira yekuteedzana kufambisa kusundira dhizaini nyowani uye zvigadzirwa, isu tinoda kuenda zvakanyanya padyo nemugovera wedu mumusika weAsia.
MuTokyo, Kana uri wekusimudza laptop yako kana kuisa mukati mevhudzi rako rekuomesa bvudzi, nzvimbo dzemagetsi dzinogona kutaridzika senge dzichabatira tambo dzako dzemagetsi dzeAmerica asi iwo magetsi ari zana pachinzvimbo cheNorth America zana nemakumi maviri .Saka zano rakakosha kusarudza injini injini nemhando kana yakagadzirirwa dhizaini kodhi.